वामदेव विरुद्ध ईश्वर पोख्रेलको डर लाग्दो रुप, यसरी गर्छन गौतमलाई हराउन मिडियालाई प्रयोग – Etajakhabar
२४ असोज, काठमाण्डौ । पत्रकारिता आफ्नो आचारसहिंता अनुसार चलेको हुन्छ । कुनै पनि पत्रकारले त्यही पत्रकारिताको आचारसंहितालाई गाइडलाईन मानेर समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ । विश्वको पत्रकारिता पनि त्यही अनुसार नै चलेको हुन्छ भन्ने मान्यतामा रहेको हुन्छ । पाठकले नि त्यही आचारसहिंतामा रहेर लेखिएको समाचारलाई बढि पढ्ने गर्दछ । तर नेपालको पत्रकारितामा त्यो आचारसंहिता प्रयोग नगरि पितपत्रकारिता गरेको पाइन्छ । र पित पत्रकारिता गराउने नेपालमा पछिल्लो समय एउटै मात्र नेता हुन् रक्षा मन्त्री समेत रहेका नेकपामा नेता ईश्वर पोख्रेल ।
ृउनीद्धारा सञ्चालित केही नाम चलेका अनलाईन पत्रिकाहरु र केही कोठे अनलाईन पत्रिकाहरुले राजनीतिक नेतादेखि कलाकारसम्मको जे पायो त्यही र मन नपरेको भन्दैमा मोटो रकम खल्तिमा कोच्दै जे मन लाग्यो त्याही लेखेर बदनाम गरिरहेका छन् । आफूलाई अब्बल पत्रकारिता गर्ने भन्ने अनलाईनलाई अहिले नेपाली पत्रकारितालाई धमिल्याइरहेका छन् ।
कोही कसैलाई मन नपर्नु त्यसलाई स्वभाविक मानिन्छ । र त्यो स्वभाविक पनि हो । तर मन पर्दैन भन्दैमा आफ्ना व्यक्तिक विचारहरुलाई पत्रकारीताको माध्यमबाट प्रहार गर्दै सञ्चार जगतलाई नै प्रदुषित गराउन खोज्नु कत्तिको न्याय संगत कुरा हो ? प्रसंग हिजै मात्र कुनै अनलाईनले प्रकाशित गरेको ‘वामदेवको रहर, नेकपालाई कहर’ भन्ने शिर्षकको समाचार सम्प्रेषण ।
पछिल्लो समय देशको राजनीतिक माहोल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एंव नेकपाका सचिवालय सदस्य वामदेवको पेरिफेरिमा घुमिरहेकै बेला यस्ता समाचारको शिर्षक नै मेरोलागि निकै रोचक बन्न पुग्यो । यसै पनि वामदेवको विषय पछिल्लो समयमा मेरोलागि मात्र नभई सबैकालागि नेपाली राजनीतिमा गौतमको भुमिका अब के हुन्छ होला त ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भई एउटा गम्भिर र रोचक विषय बन्न पुगेको छ । त्यसमा पनि नेकपालाई नै कहर लगाउने गरि वामदेवले किन यस्तो रहर जगाएछन् त ? भन्ने कौतुहलतामा मैले समाचार पढें ।
जब समाचार पढें म अचम्मित भएँ । नाम चलेको सञ्चार माध्यमले समाचार सम्प्रेष्ण गर्दा शब्द चयनमा ख्याल नगरेको पाइयो । के एउटा पत्रकारले आफुलाई मन परेको नेता होईन भन्दैमा पत्रकारिताको मर्म र धर्मलाई विर्सिदै सञ्चार माध्यमबाट कलमको दम्भ प्रर्दशन गर्न मिल्छ र ? वामदेवको विरुद्धमा हिजो प्रकाशित समाचार सम्प्रेषण जुन पत्रकार र ती पत्रकारद्धारा लेखिएको समाचार सम्पादन जुुन सम्पादकले गरे उनीहरुको शब्द चयनलाई मध्य नजर गरि हेर्ने हो भने वामदेवसंगको नितान्त उनीहरुको व्यक्तिगत दुष्मनी या फेरी उनीहरु सिधै ईश्वर पोख्रेलबाट परिचालित भएका हुन् भन्ने लाग्दछ ।
यदि त्यसो होईन भने ती सञ्चार माध्यमले देशको मुलधारमा उभिएर राजनीति गर्न सफल एउटा शिर्ष नेताको विषयमा निष्पक्ष भएर समाचार सम्प्रेषण पनि गर्न सक्नु पर्दथ्यो । त्यो किन गर्न सकेन ? देशका ठुला र नाम चलेका सञ्चार माध्यमबाटै जबजब वामदेवको विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्नु पर्ने हुन्छ तबतब नकारात्मक टिप्पणीमै अधारित रहेर उनको विरुद्धमा कलम चल्दै आएको पाईएको छ । अहिले पनि उनी सांसद बन्न लागिरहेको बेला आफुलाई ठुला मिडियाको सूचिमा राख्न सफल अनलाइनहरुले उनको विरुद्धमा समाचार सम्प्रेषण गरेको देख्दा र पत्रकारितामा रामै्र अनुभव बटुलेका पत्रकारहरु आफ्नो मगज गुमाएर अरुबाटै चलेको देख्दा कठै बरा भन्नु बाहेक अरु केही शब्द भेटिंदैन ।
वामदेव गौतम आफ्नो चाहनाले उम्मेदवार हुन चाहेका होईनन् । यो कुराको सबैलाई हेक्का होस् । उनी देशको आवश्कतामा सांसद बन्नका लागि उम्मेदवार हुन थालेका हुन् । धेरै परको समय पनि होईन जब वामदेवले आफ्नो पुस्तक नवनिर्माण महाअभियानलाई विमोचन गरे । त्यसैको भोलि पल्ट पुस्तक र वामदेवको विशेषतालाई जोडेर कुनै अनलाईनमा उनको नकारात्मक शिर्षकमा समाचार सम्प्रेषण भयो । एउटा राजनीतिक व्यक्तिले मुलुकको निर्माण कस्तो बनाउने भन्नेमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दा विश्लेषण गरेर सकारात्मक पाटाबाट पनि समाचार सम्प्रेषण गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसो कमै मिडिायाले गरेको पाईयो ।
त्यतिबेलाका मै हुँ भन्ने एउटा अनलाईनले ‘झोँकी वामदेवलाई अध्ययनशिल बनाउने किताब’ शीर्षकको समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । जस्मा वामदेवलाई कटु आलोचना गर्ने मौका पाठक वर्गलाई राम्रै मिलेको थियो । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । वामदेवका विषयमा त्यस्ता अनलाईनमा कुनै पनि समाचार या विचार हेर्ने हो भने सकारात्म केही पढ्नै पाईदैन । यसको अर्थ प्रष्ट रुपमा यही हुन जान्छ कि वामदेवको विरुद्धमा कलम चलाउन कोही पत्रकार पार्टी पतिं भित्रैबाट सञ्चालित छन् । जस्ले पत्रकारिताको आचार संहितालाई विर्सिएरै वामदेव विरुद्धको अनलाईन पत्रिका बनाई रहेका छन् ।
असोज २३ गते एउटा अनलाईनमा प्रकाशित समाचारको केही अंश जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गर्न चाहें, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हरेक बैठकमा शीर्षनेताहरु वामदेव गौतमको किचकिचबाट आजित बनेका थिए । उनीहरु पार्टीको बैठक नसकिँदै बाहिर निस्किने बाहना खोज्थे । स्रोतका अनुसार पार्टीको हरेक बैठकको अन्त्यतिर ‘एकछिन एकछिन’ भन्दै वामदेवले आफू चुनाव लड्ने प्रसंग निकाल्थे । कहिले डोल्पा, कहिले दैलेख त कहिले बाँकेबाट चुनाव लड्छु भन्दै शीर्षनेताहरुलाई उनले ‘इरिटेड’ बनाइसकेका थिए । डोल्पाका धनबहादुर बुढालाई पर्यटन राज्यमन्त्री बनाइनुको मूल कारण वामदेव नै हुन् ।
केही समय मन्त्री हुन पाए वामदेवका लागि सांसद पद खाली गरिदिने बुढाले वाचा जो गरेका थिए । तर, मन्त्रीको सट्टा राज्यमन्त्री मात्र बनाएको भन्दै बुढाले राजीनामा दिन मानेनन् । डोल्पा नपाएपछि वामदेवले दैलेख र बाँके ताके । तर, त्यसमा पार्टीका नेताहरु सकारात्मक भएनन् । आफूनिकट नेताहरुले समेत उनलाई चुनाव नलड्न सल्लाह दिइरहेका थिए । पछिल्लोपटक नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंमले पार्टी नेताहरु सामू भने, ‘अब वामदेवको च्याप्टर क्लोज भयो ।’
तर, सोमबार सचिवालय बैठकमा गौतमले पार्टी नेताहरुलाई सरप्राइज दिएका छन् । महासचिव विष्णु पौडेलले ‘काठमाडौं ७ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रामवीर मानन्धरको राजीनामा आएको’ सुनाए । अप्रत्याशित कुरा आएपछि नेताहरु आश्चर्यमा परेका थिए । पौडेलले राजीनामा पत्र बढेर सुनाए, जसमा ‘नेता गौतमका लागि आफू पद छाड्न तयार रहेको’ उल्लेख छ ।
‘च्याप्टर क्लोज भयो भनिएको थियो । तर, सचिवालयमा एकाएक रामवीरको राजीनामा पेश भएपछि हामी पनि तीन छक्क प¥यौं,’ एक नेताले भने ।’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हरेक बैठकमा शीर्षनेताहरु वामदेव गौतमको किचकिचबाट आजित बनेका थिए । उनीहरु पार्टीको बैठक नसकिँदै बाहिर निस्किने बाहना खोज्थे ।
पौडेलले राजीनामा पत्र बढेर सुनाए, जसमा ‘नेता गौतमका लागि आफू पद छाड्न तयार रहेको’ उल्लेख छ । ‘च्याप्टर क्लोज भयो भनिएको थियो । तर, सचिवालयमा एकाएक रामवीरको राजीनामा पेश भएपछि हामी पनि तीन छक्क र्पयौं,’ एक नेताले भने ।’
माथि उल्लेखित यी समाचारका एकएक हरफहरुलाई दोर्होयाएर पढ्दा, ‘एक नेताले भने ।’, ‘स्रोतका अनुसार,’, ‘किचकिच’, ‘इरिटेड’ आदि जस्ता शब्दहरु कि पत्रकारको र सम्पादकको आफ्नै भाषा हो भन्ने अनुभुति हुन जान्छ । कि भने अरुद्धारा सञ्चालित भाषा हो भन्ने अनुभुति हुन जान्छ ।
किनकी ‘किचकिच’ र ‘इरिटेड’ जस्ता शब्द चयन गर्दा पत्रकारले प्रत्यक्ष आफ्नो आखाँले देखेको हुनु पर्छ । जब कि सचिवालय बैठकमा पत्रकारलाई प्रत्यक्ष बस्न अनुमति नै छैन । त्यसैले यस्ता शब्दहरु नितान्त त्यस्ता मिडियाहरुबाट वामदेव विरुद्ध कलम चलाउने पत्रकारको आफ्नै मनगढ्न्ते शब्द चयन र भाषा शैली हो भन्ने सजिलै बुझिन्छ ।
रह्यो कुरा श्रोत लुकाएर समाचार सम्पादन गर्ने पत्रकारितामा त्यो जायज हो । तर याहाँ श्रोत लुकाउन जरुरी छैन किनकी सचिवालय बैठकमै जब महासचिव विष्णु पौडेलले ‘काठमाडौं ७ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रामवीर मानन्धरको राजीनामा आएको’ राजीनामा पत्र पढेर सुनाए, तब रक्षा मन्त्री ईश्वर पोख्रेलले तुरुन्तै विरोध गरेको कुरा पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा छरप्रष्टै सम्प्रेषण भएका थिए ।
यीनै कुराहरुलाई मध्य नजर गरेरै विष्लेशण गर्ने हो भने यहाँनिर प्रष्ट देख्न सकिन्छ । वामदेवको विरुद्धमा पार्टीपंति भित्र खुलेरै विरोध गर्ने र वामदेवको राजनीतिलाई धरातलमा पार्न चहाने एउटै मात्र नेता ईश्वर पोख्रेल र सञ्चार जगतबाट वामदेवको बदखुँवाई गरेर गौतमको विषयलाई सनसनी मच्याईदिने केही अनलाईन पत्रिका जुन ईश्वर पोख्रेलबाट सञ्चालित भएर चलेको भन्ने पनि प्रष्टै बुझिन्छ ।
एक नेताले नाम नभन्ने सर्तमा जस्ता पर्यावाची शब्दहरुको आडमा समाचार सम्पादन गर्ने हो भने के ईश्वर पोख्रेल र त्यस्ता पोख्रेलद्धारा अनलाईन पत्रिकाहरु बाँकि रहला त ? पक्कै रहंदैनन् । यी तीन चार वटा शब्द मात्र हैनन् थुप्रै शब्द चयन गरेर कटाक्ष हान्दै कटु आलोचना गरेर समाचार होस् या विचार सम्प्रेषण गर्न जस्ले पनि जान्दछ र सक्दछ पनि ।
तर पत्रकारिताको आचार संहिता र पत्रकारिताको मर्म अनि धर्ममै आधारित रहेर पत्रकारिता गर्ने सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मी पनि छन् नेपालमा । जसबाट त्यस्ता अनलाईन पत्रिकाहरु जो अरुबाट सञ्चालित भईरहेका छन् उनीहरुले अझैं धेरै नै सिक्न जरुरी छ । हेक्का रहोस् पत्रकारिता जगत भनेको सही र सत्य समाचार सम्प्रेण गर्ने हो नकि व्यक्तिगत दुष्मनीलाई कलमको दम्भमा समप्रेषण गर्दै पाठक वर्गलाई भ्रमित पार्नु ।
अहिले वामदेवलाई खुइल्याउने भनेर स्वयम ईश्वर पोख्रेल र कतिपय मिडिया लागेको देखिन्छ । अरुबाट हुण्डी खाएर वामदेव गौतमका विरुद्ध समाचार लेख्ने ती अनलाइने पत्रकारका कति दिन चल्दो रहेछ । हेदै जाउँ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन २४, २०७५ समय: १६:२०:०३